महिलामा मात्र देखिने केहि प्राणघातक रोगहरू ! जानकारीकाे लागि अवश्य पढ्नु हाेला - ज्ञानविज्ञान
रोगले धनी-गरिब भन्दैन । सानो-ठूलो भन्दैन । महिला-पुरुष भन्दैन । हामी यस्तै मान्यता राख्छौं । तर, कतिपय रोग यस्ता हुन्छन् जो पुरुषलाई मात्र वा महिलालाई बढी असर गर्न सक्छ । जस्तो प्रोस्टेट क्यान्सर पुरुषलाई लाग्छ, स्तन क्यान्सर महिलालाई । भलै स्तन क्यान्सर पुरुषलाई पनि लाग्न सक्छ, तर दुलर्भ मात्रामा ।
केहि सम्बन्धित थप जानकारी,
पाठेघरको क्यान्सर के हो ? कारण, लक्षण र रोकथाम
पाठेघरको क्यान्सर अन्तर्गत पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा पाठेघरको भित्रपट्टिको क्यान्सर प्रमुख हो । ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसका कारणले पाठेघरको मुखको क्यान्सर भएको पाइन्छ । यसका साथै धेरैजना पुरुषसँग यौनसम्पर्क राख्ने, सानो उमेरमा धेरै सन्तान जन्माउने महिलामा पनि यो क्यान्सर हुनसक्छ ।
४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई पाठेघरको क्यान्सर हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । ५० वर्ष उमेरमाथिका महिलाहरू अर्थात् रजोनिवृत्ति भएका महिलाहरूमा पाठेघरको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ र पाठेघरको क्यान्सर भएका महिलाहरूमध्ये ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलाहरू ९५ प्रतिशत हुन्छन्। महिनावारी बन्द भएपछि असामान्य रक्तश्राव भएमा पाठेघरको क्यान्सर लगभग सुनिश्चित हुन्छ ।
समयमै उपचार गरेमा पाठेघरको क्यान्सरबाट ८४ प्रतिशत बाँच्ने सम्भावना हुन्छ। पाठेघरको पूर्णरूपमा क्यान्सर भइसकेपछि ८३ प्रतिशत महिलाहरू पाँच वर्ष बाँच्छन् भने सुरुको अवस्थामा निदान भएका ९६ प्रतिशत महिलाहरू पाँच वर्ष बाँच्ने सम्भावना हुन्छ । हाम्रोजस्तो अविकसित, स्वास्थ्य चेतना एवं सेवा केन्द्रीकृत भएको मुलुकमा कमसेकम प्रत्येक अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अल्ट्रासाउन्ड र योनिश्रावको जाँच गर्ने न्यूनतम व्यवस्था भएमा पाठेघरको क्यान्सरको समयमै निदान भएर महिलाको मृत्युदर घट्ने सुनिश्चित छ ।
१. रजोनिवृत्ति भइसकेपछि रक्तश्राव हुनु।
२. यौन सम्पर्कको समयमा बढी पीडा हुनु।
३. तल्लो पेट दुख्ने, सुन्निने तथा हावा भरिएजस्तो हुनु।
५. शारीरकि तौल अस्वाभाविक रूपमा घट्नु वा बढ्नु।
६. लामो समय रक्तश्रावका कारण रक्तअल्पता हुनु।
वैज्ञानिकहरूले पाठेघरको क्यान्सरको ठोस कारण पत्ता लगाउन नसके पनि हालसम्मको अनुसन्धानबाट निम्नलिखित कारक तत्त्वहरू प्रमाणित गरेका छन्
पाठेघर महिलाको शरीरको तल्लो पेटमा रहने थैली आकारको प्रजनन अंग हो। पाठेघरलाई गर्भाशय पनि भनिन्छ । महिनाबारीको समयमा रक्तश्राव यहीँबाट हुन्छ र महिला गर्भवती हुँदा गर्भको बच्चा यसै थैलीभित्र हुर्किन्छ । पाठेघरलाई वरिपरिका मासंपेशी र तन्तुले आफ्नो ठाउँमा अड्याइराखेको हुन्छ ।
विभिन्न कारणले गर्दा पाठेघरलाई आफ्नो ठाउँमा थामेर राख्ने मासंपेशी र तन्तु कमजोर हुन जान्छन् । फलस्वरूप पाठेघरको केही भाग वा सिंगै पाठेघर योनिसम्म वा त्योभन्दा बाहिर निस्किन्छ । यो अवस्थालाई पाठेघर झरेको वा आङ खसेको भनिन्छ। यो समस्या उपचार गरेर निको हुन्छ ।
महिला सुत्केरी भएपछि पाठेघर खुम्चेर पहिलेकै अवस्थामा आइपुग्न करिब ६ हप्ता लाग्छ। सुत्केरी भएका बेला पाठेघरलाई अड्याइराख्ने मासंपेशी धेरै कमजोर भएका हुन्छन् । यी तल उल्लिखित कारणले पाठेघर झर्ने समस्या हुन सक्छ ।
सुत्केरी गराउन सकेसम्म स्वास्थ्य संस्थामा जाने ।
यिनै स्थितिका आधारमा पाठेघर झर्ने समस्याबाट पीडित महिलाको उपचार गरिन्छ । त्यसैले आफूलाई पाठेघरको स्थिति सामान्य अवस्थामा नभएको जस्तो लाग्छ र काम गर्दा असजिलो महसुस हुन्छ भने उपचारका निमित्त स्वास्थ्य कार्यकर्तासँग सम्पर्क गरी हाल्नुपर्छ । पाठेघर झरेको सामान्य अवस्थाको उपचार सजिलै हुन्छ ।
यसबेला योनि खुम्चाउने व्यायामले मात्र पनि पाठेघरलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ । यो व्यायामले पाठेघर र योनिको वरिपरिका मासंपेशी बलिया हुन्छन् र पाठेघरलाई अड्याई राख्न सक्ने बनाउँछ । सामान्य अवस्थामा रिङ्गपेसरी राखेर अस्थायी उपचार पनि गर्न सकिन्छ ।
यो समस्या विशेष गरी हाम्रो समुदायमा बच्चा जन्माउँदा या सुत्केरी भएको बेला महिलाले उचित स्याहार नपाउँदा हुन जान्छ । त्यसैले गर्भवतीलाई सुत्केरी गराउन वा बच्चा जन्माउन घरमा नगराई स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्छ ।
सुत्केरी अवस्थामा महिलालाई पोसिलो खाना खान दिने, आराम दिने, गह्रौँ भारी उठाउन नदिने जस्ता कुरामा परिवारका अन्य सदस्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै कम उमेरमा विवाह नगराउने, धेरै सन्तान नजन्माउने कुरामा सचेत हुनुपर्छ। समस्याबाट पीडित महिलालाई हेयको दृष्टिले नहेरी समयमै उपचार गराउन सहयोग गर्नुपर्छ। यसमा पतिको भूमिका अझ धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यस्तो छ पाठेघर बाहिर बच्चा बस्नुको कारण, यसको लक्षण र उपचार
१. गर्भ फुटेको छ भने रगतको व्यवस्था गरी तुरुन्त शल्यक्रिया गर्नुपर्छ
Don't Miss it कसरी पहिचान गर्ने डिप्रेसन ? यसको कारण र लक्षणहरू के–के हुन् !
Up Next ‘जति मीठो निद्रा उति लामाे आयु’ : कुन कुन उमेरकालाई कति निद्रा आवश्यक ?
झिंगा आएर झन्झट भएमा यी हुन् सजिला भगाउने तरिका
१. कपूर थोरै कपूर बाल्नुहोस् र पूरा कोठाभरी यसको धुँवा फैलाउनुहोस् । यसको गन्धले घरमा झिंगा आउँदैन । २. धुलो…